iyo apple tarisa 6 uye ipad mhepo 4 (asi kwete iphone 12 5g) september chiitiko chiri chepamutemo, pano & maapuro maitiro ekuitarisa
Kuru Nhau & Ongororo Iyo Apple Watch 6 uye iPad Air 4 (asi kwete iPhone 12 5G) chiitiko chaGunyana chiri pamutemo, heino & maapuro maitiro ekuiona
Iyo Apple Watch 6 uye iPad Air 4 (asi kwete iPhone 12 5G) chiitiko chaGunyana chiri pamutemo, heino & maapuro maitiro ekuiona
ZVIMWE:Chiitiko cheApple chakatiunzira boka rezviziviso zvechigadzirwa zvinonakidza. Tarisa ivo kunze:
Iyo Apple Watch Series 6 uye Apple Watch SE zviri pamutemo
Apple inozivisa nyowani uye yakavandudzwa iPad, iPad Mhepo
Apple Imwe kunyorera inosunga Apple masevhisi mune imwechete package
Apple inozivisa Fitness +, sevhisi nyowani yekukubatsira iwe kuti ugare wakagwinya
Iyo & apos; d ive chinyorwa kutaura kuti 2020 igore risingawanzo, kana, pane kudaro, kurerutsa. Pakati peCovid-19 dambudziko, kukiyiwa uye kuparara kwecheni yekutengesa pasi rose, Apple yakwanisa kuchengetedza musoro wayo pamusoro pemvura, neayo kuwedzera mutengo wemari chibvumirano chekuti vanhu vachiri kutarisira zvinhu zvikuru kubva pachiri chisati chasvetuka chikara chegore chakatenderera.
Ichokwadi, iyo iPhone 5G 2020 inogona kunonoka , uye iyo isiri pasi pematanhatu kana manomwe matsva Apple zvishandiso zvakazivisa zvirinyore kuburitswa kwenhepfenyuro kana vateereri-vasina kubvumidzwa pamhepo kuvhura zviitiko, asi isu tiri pakupedzisira kutanga maitiro, se Apple yatoburitswa kare yekutanga mune yayo nhevedzano yezviziviso zvenguva zhinji yekudonha mwaka.
Iko uye nguva yekuona Apple & apos; s Gunyana 2020 chiitiko
Sezvo zvave tsika, Apple ichave ichifambisa yayo online-chete Gunyana 15 chiitiko paYouTube pa 10am Pacific / 1pm Kumabvazuva, uye iwe unogona kuona iyo hombe Apple Watch Series 6 uye iPad Air 4 kuvhura muApple & apos; s YouTube streamer pamusoro.
Iyo YouTube inorarama rukova rweApple & apos; s Gunyana 15th chiitiko chakazivisa mamwe metadata ayo anoratidza izvo zvichataurwa nezvazvo padariro, zvakare, zvinoti Apple Watch, iPad, AirPods, TV, uye kunyangwe Mac.
Chii chaunotarisira kuApple & apos; s Gunyana 15 2020 chiitiko?
Kana runyorwa rwechigadzirwa ruchiziviswa kuApple & apos; s Gunyana 2020 chiitiko pazasi chinoita senge chikuru, ziva kuti mabhuku echiitiko haasati apfuura maawa maviri mukarenda kupfuura zvese.
Apple iPad Mhepo 4
Apple AirPods Studio uye / kana AirPods 3 (inogona kuziviswa gare gare munaGunyana)
AirTags (inogona kuziviswa gare gare munaGunyana)
Apple iOS 14 kusunungurwa kwe iPhone 6s uye kumusoro
Apple wachiOS 7 kusunungura
Apple Imwe kunyorera bundle neApple Music, TV +, Arcade, Nhau uye nezvimwe
Inonakidza metadata mune iyoyo pre-chiitiko YouTube vhidhiyo peji #AppleEvent (Batanidza: https://t.co/8TOYXfsh8z ) pic.twitter.com/wim1fGQtNh
- Guilherme Rambo (@_mukati) Svondo 8, 2020
Apple AirTagApple ichazivisa riini Watch 6 uye iPad Air 4 2020?
Nyamavhuvhu 15, na10am Pacific nguva, kubva kuApple Park, panguva yechiitiko chinonzi 'Nguva Nhunzi'
Apple iPad Air 4 uye Tarisa 6 2020 kukoka kwechiitiko
Apple ichabata izvo pasina mubvunzo ichave inorarama-yakasarudzika asi vateereri-vashoma chiitiko chekuzivisa kudonha kwayo chirimo nekukurumidza munaGunyana 15, na10am Pacific Nguva.
Ipo vanhu vanga vachitarisira kwete zvishoma pane ina itsva iPhone 12 mhando kuvhurwa ipapo, Bloomberg & apos; s Maka Gurman matipi kuti ichi chichava Apple Tarisa 6 uye iPad Mhepo 4 chiziviso chiitiko, pamwe pamwe pamwe nezvimwe zvidiki dhi kuvhura Icho chokwadi chekuti chiitiko ichi chinonzi 'Nguva Nhunzi' chinofanira kushanda sehumwe humbowo hwekuti ichi chichava hwendefa uye zvinopfekwa, kwete chiitiko che iPhone-centric.
Ndiri kuudzwa Apple haizozivisa iyo iPhone kusvika Gumiguru. Izvi ndezve iyo iPad uye Apple Watch mune zvese mukana. https://t.co/pw1oVXVoaL
- Maka Gurman (@markgurman) Svondo 8, 2020
Uyezve, Apple inotarisirwa kuita zvinotevera iOS 14 kugadzirisa kuburitsa zuva repamutemo panguva iyoyo, zvakare, sezvo zvichinzi haizomirira & apos; kumirira iyo iPhone 12 kuti iuye pasi kuti itange kugadzirisa yako iPhone 6s ku iPhone 11 kusvika iOS 14 .
Tokuona mumazuva manomwe! #AppleEvent pic.twitter.com/zDXneII5di
- Greg Joswiak (@gregjoz) Svondo 8, 2020
chinyorwa 7 s peni yakanamirwa
Maitiro ekudzima Center Stage FaceTime vhidhiyo pane iyo Apple iPad Pro (2021)
AT & T Samsung Galaxy S7 uye S7 pamucheto vanogamuchira nyowani yekuvandudza, inounza kuchengetedzeka kugadzirisa
Amazon iri kumhanya kutenga imwe, tora imwe yemahara yekutengesa pane inozivikanwa Echo Dot Vana Edhisheni
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G vs Cherekedza 10+: specs, saizi uye dhizaini kuenzanisa